Tag: sharingkekọrịta | Martech Zone
Gini Mere Ama Ama Ji Di Ukwuu? Ndumodu: Ọdịnaya, Ọchịchọ, mmekọrịta mmadụ na mmekọrịta ya na mgbanwe!
Ọtụtụ n'ime unu na-eleta blọọgụ anyị n'ihi mbọ m na-agba n'ịmekọrịta ihe ngosi azụmaahịa. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe… M hụrụ ha n'anya ma ha bụ ndị a ma ama. Enwere ọtụtụ ihe kpatara na infographics na-arụ ọrụ nke ọma maka atụmatụ azụmaahịa dijitalụ nke azụmahịa: Anya - Ọkara nke ụbụrụ anyị na-etinye uche na ọhụụ na 90% nke ozi anyị jidere bụ ihe anya. Ihe osise, eserese, na foto bụ ihe dị egwu ị ga-eji gwa onye zụrụ gị okwu. 65%
10 Usoro Mgbasa Ozi Social nke na-akwalite mbak na ntụgharị
N'adịghị ka nkwenkwe a ma ama, mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta abụghị naanị na ị na-agbanwe agbanwe na ntanetị gị n'ịntanetị. Ga-ewepụta ọdịnaya nwere okike na mmetụta - ihe ga - eme ka ndị mmadụ chọọ ime ihe. O nwere ike ịdị nfe dịka onye na-ekekọrịta post gị ma ọ bụ bido ntụgharị. Ihe ole na ole na-amasị gị na ikwu okwu ezughị. N'ezie, ebumnuche bụ ịrịa nje mana ihe ekwesịrị ịme iji nweta
Gịnị Na-akpali Gị Sharekekọrịta N'ịntanetị? Psychology nke ringkekọrịta
Anyị na-ekekọrịta kwa ụbọchị site na ntanetị blog na mmekọrịta anyị na ibe anyị. Ebumnuche anyị dị mfe - mgbe anyị chọtara ọdịnaya dị egwu ma ọ bụ chọpụta ihe n'onwe anyị, anyị chọrọ ka ị mara maka ya. Nke ahụ na-eme anyị njikọ nke nnukwu ozi ma na-enye gị, onye na-agụ akwụkwọ anyị uru. Site n'ime nke a, anyị na-etinye gị n'ọrụ ma nwee olile anya ime ka mmekọrịta anyị na gị mikwuo emie. Dị ka ị na-amalite ịtụkwasị anyị obi maka nnukwu ozi na akụrụngwa, anyị
5 Element of Viral Content
Saturday, July 6, 2013 Sunday, July 7, 2013 Douglas Karr
Ndị ezigbo mmadụ na Social Media Explorer ezigala ozi ederede, Ihe Ntanetị 5 nke Ọrịa Malitere ịrịa, site na Intersection Consulting. Onwe ya, achọghị m mkpụrụ okwu viral maka infographic a… Okwu a na-ekekọrịta m. Ọtụtụ oge ị nwere ike karịa atụmanya na isi ihe ọ bụla n'ime ihe ọmụma a - mana ọ pụtaghị na ọ na-amalite ịrịa. Leo Widrich n'elu Buffer Blog dere nnukwu post banyere ihe na-eme ka ọdịnaya gbasaa. N'ime ya,
Tọzdee, Eprel 18, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Otu akụkụ dị ukwuu nke ịga ogbako dịka Social Media Marketing World bụ na ị ga-ahapụ nkasi obi nke netwọkụ gị wee banye ọtụtụ ndị ọzọ. Na agbanyeghị nha netwọk gị, ị na-ejikarị ozi na ozi akọwara n'ime. Toga nzukọ mba ụwa dịka nke a ga-emepe gị nye ọtụtụ netwọkụ ọhụụ. Anyị zutere ọtụtụ ndị folks na San Diego ma anyị ga-aga n'ihu